အိမ်သုံးရုံးတိုင်းကတစ်ခုလိုတယ်။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 4, 2006 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2014 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်က (၂၀၀၅) လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတော်များများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်တွင်းပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ hardware အသစ်အချို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ကွန်ပြူတာအသစ်၊ netgear ကြိုးမဲ့ router အသစ်နှင့်ကြိုးမဲ့ကဒ်များ ၀ ယ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာကျွန်ုပ်၏ LinkStation ဖြစ်သည်။
LinkStation သည်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးမဲ့ router နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး 250Gb နေရာရှိသည်။ LinkStation အတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကလေးများ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဗဟိုဂီတလမ်းညွှန်နှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် drive တစ်ခုတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ LinkStation သည် USB outlet တစ်ခုနှင့်အတူပရင်တာ၊ FTP ဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်မီဒီယာလွှင့်ထုတ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုမျှဝေရန်လည်းပါ ၀ င်သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ပရင်တာကိုကွန်ပျူတာနဲ့အဝေးကနေဝေးကွာစေပြီးအဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာထားပေးတယ်။
ငါ့အကြိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာများနှင့်ကွန်ယက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုပေါ်မှာနေရာလွတ်သိပ်မကျန်တော့တာပါပဲ။ ငါစီမံကိန်းပြီးဆုံးအခါတိုင်း, ငါကအဲဒီမှာကူးယူပါလိမ့်မယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်တိုင်း၊ အဲဒီမှာကူးယူပြီးကွန်ပျူတာတွေကိုပစ္စည်းတွေဝေမျှချင်တဲ့အခါတိုင်း - ဖိုင်တွေအားလုံးကိုသူတို့အကြားမျှဝေပေးတယ်။ 'folder share' မရှိ၊ install disk များ၊ ပြproblemsနာလုံးဝမရှိပါ။
လွန်ခဲ့သော ၇ လခန့်ကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် boot ကဏ္pedကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သော Norton Antivirus update ကိုလုံးဝပိတ်ထားသည်။ ငါ drive ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုခြစ်ရာကနေပြန်ဖွင့်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်ခြွင်းချက်မရှိပါ အားလုံး ကွန်ယက်ကို drives တွေကိုအပေါ်တက် loaded ။ ငါတစ်နေ့သို့မဟုတ်ဒါအတွက် back up ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်တစ် ဦး စည်းချက်လက်လွတ်မ။
တစ်နှစ်ခွဲခွဲကြာပြီးတဲ့နောက်၊ ကျွန်တော့်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကသူကိုသူ့အတွက်ထပ်ခါထပ်ခါဆန်းစစ်မှုလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှလျှောက်လွှာတွေတောင်မတင်နိုင်တော့ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ, ငါရှယ်ယာအပေါ်ခုန်တက်နှင့် applications များပြန်ဖွင့်။ ဒီတနင်္ဂနွေ, ငါအဟောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ download, ဒီနေ့လည်ခင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်ခေါက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်ပညာပေးခြင်းသည်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။
ကွန်ယက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာကိုသုံးပါ။ သင်ရရှိနိုင်သောအခွင့်အရေးတိုင်း၊ သင်လုပ်နေသည့်အလုပ်ကိုကူးယူပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများ၊ ယာဉ်မောင်းမွမ်းမံမှုများနှင့်ဝေစုတွင်နံပါတ်စဉ်များကိုပင်ကူးယူပါ။ ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုနေရာနှစ်နေရာတွင်လုံခြုံစွာထားနိုင်သည်။
ကွန်ယက်သိုလှောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ကောင်းသည့်အချက်မှာလိုအပ်သောအရန်နှင့်ပြန်ယူရန်အချိန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်များကို drive ထဲသို့ကူးယူလိုက်ရုံဖြင့်ဤနည်းဖြင့်အမြန်ကူးပါ။ (ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ PC များတစ်ခုစီ၏အရန်တစ်ခုစီရှိသည်။ )
အကယ်၍ သင်စဉ်းစားမိလျှင် Mac သည်ထိုအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာမြင်သည်။ တောင်မှ shared ပရင်တာ!
Tags: backup လုပ်ထားအချစ်ဇာတ်လမ်းသိုလှောင်ရေးကိရိယာ
4:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 32 တွင်
ငါလည်း LinkStation စက်ရဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးပါ။ ငါ့မှာ 160GB ဗားရှင်းရှိတယ်၊ အခု ၂ နှစ်နီးပါးကြာအောင်ပြေးနေတယ်။ အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်း၏ပစ္စည်းကိရိယာသဘောသဘာဝကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အစာကျွေးရန်မလိုအပ်ပါ။
4:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 49 တွင်
ငါသတ္တုတွင်းဝယ်ပြီးနောက်မှာ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းက 1Tb ဗားရှင်းကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါမနာလိုခဲ့! သူလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကပရင်တာ / Harddrive / Wireless Router ကိုမတည်ဆောက်ရသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။